Zon'olon-tokana indostrialy Servo Motor Voltage Regulator
USB Type-C, Fandefasana herinaratra ary famatsiana herinaratra azo volavolaina
Ny maritrano USB (Universal Serial Bus) dia nampiasaina ho toy ny fenitra ho an'ny mpampitohy sy ireo famantarana mifandraika amin'izany ary ny fandefasana herinaratra hatramin'ny taona 1996. Nandritra io fotoana io dia nisy fiovana marobe tamin'ny famaritana mba hanatsarana ny fahombiazan'ny rafitra mampiasa ireo fenitra ireo. Ny tara ...
USB Charger (Fanaterana herinaratra USB)
Ny USB dia nivoatra avy amin'ny interface data afaka manome herinaratra voafetra ho mpamatsy herinaratra voalohany miaraka amina interface data. Androany, fitaovana maro no miantoka na mahazo ny herin'izy ireo amin'ny seranan-tsambo USB ao anaty solosaina finday, fiara, fiaramanidina na koa socket wall. Ny USB dia nanjary toha-herin'ny herinaratra hatraiza hatraiza ...
USB-C sy ny fandefasana herinaratra manazava
Eo amin'ny tarehin'ny charger PD Gan dia misy seranana roa vaovao: USB-C sy USB-C Power Delivery. Ny voalohany dia port-USB-C fotsiny izay miasa amin'ny alàlan'ny fenitra famenoana USB 3.1 farany hatramin'ny 3 amps. Ny faharoa dia manohana teknolojia famahanana haingana izay antsoina hoe Power Delivery. Fanaterana herinaratra (PD) i ...
Fampahalalana momba ny indostrian'ny USB PD & Type-C
Ny USB PD & Type-C Asia Display Charging Head Network dia nanomboka hetsika iray hampiroboroboana ny indostrian'ny famahanana haingana, izay natao nandritra ny fotoana 12 nifanesy. Nandritra izay dimy taona lasa izay, ny fihaonana an-tampon'ny indostrian'ny famahanana haingam-pandeha notontosain'ny Charging Head Network dia nahazo ny fandraisana anjara feno hafanam-po ...
Ny firoboroboan'ny charger USB GaN
Ny mpamaky herinaratra GaN (gallium nitride) dia nisy fanatrehana lehibe tao amin'ny CES tamin'ny taona 2020 - famantarana izany fa amin'ity taona ity dia hahita fahalianana sy fandraisana an-tanana amin'ireto fitaovana kely kely sy haingana kokoa ireto ary mahomby kokoa. Amin'ny antsasaky ny taona dia misy porofo marobe fa izany no izy. Ny pro ...
Huawei Fold Screen Mobile Phone Mate X2
Vao tsy ela akory izay dia navotsotra tamin'ny fomba ofisialy ny andian-tsarimihetsika vaovao nandrasana nandrasana hatry ny ela an'ny Huawei Mate X2. Ity finday sarany efa ho 3000USD ity dia miaraka amina processeur 5nm Kirin 9000 flagship processeur. Aorian'ny fisehoana dia mahatratra 8 santimetatra ny haben'ny efijery. Izy io dia mandray ...
Te hanana hery bebe kokoa, fa haingana kokoa? Ity GaN tech vaovao ity dia milaza fa afaka manolotra
Ny andro fitaterana biriky herinaratra goavambe sy tariby maromaro hitazomana ny fitaovanao dia mety ho tapitra. Ny ora fiandrasana ny smartphone na solosainao findainy handoavam-bola, na ny fahagagana amin'ny charger mafana mampatahotra, dia mety ho lasa zavatra taloha ihany koa. Eto ny teknolojia GaN ary mampanantena ny ...
Na izany aza, ity olan'ny fampifanarahana ity dia saika ho lasa taloha tamin'ny fampidirana ny famaritana ny herinaratra USB. Ny fandefasana herinaratra USB (na PD, raha fintinina) dia fenitry ny famahanana tokana izay azo ampiasaina manerana ny fitaovana USB rehetra. Raha ny mahazatra, ny fitaovana tsirairay ampiasan'ny USB dia hanana ny ...